Wiil iyo hooyadiis oo lagu dilay deegaan ku dhaw magaalada guriceel ee gobolka galgaduud… | Mudug24
Wiil iyo hooyadiis oo lagu dilay deegaan ku dhaw magaalada guriceel ee gobolka galgaduud…
Sida ay sheegayaan wararka inaga soo gaaraya Gobolka Galgaduud ee Bartamaha dalka Soomaaliya kooxo hubaysan ayaa shalay galab waxa ay ku dileen deegaan ku dhaw Magaalada Guriceel Wiil iyo hooyadiis oo hal meel kuwada sugnaa.
Dilkaan ayaa ka dhacay deegaan lagu magacaabo Balli-oog oo Qiyaastii 60-KM ujira Magaalada Guriceel, sida ay sheegayaan dadka deegaanka, kooxaha hubaysan ayaa qaarijiyay wiilka iyo hooyadiis oo xilliga ay soo weerarayeen ku sugnaa aqalkooda.
Waxaa la aaminsan yahay in dilkaan uu salka ku haayo aano qabiil oo ka taagnaa deegaankaasi, iyadoo falka dilka ah ay aad uga naxeen qoyska ay kasoo jeedeen hooyada iyo wiilkeeda ee la dilay.
Guddoomiye kuxigeenka Magaalada Guriceel Cali Baashi Aadan Diiriye, ayaa tilmaamay inay aad uga xun yihiin dilkaasi loo geystay Wiilka iyo hooyadiis, islamarkaana wuxuu sheegay inay wadaan baaritaan ku aadan cidii ka dambeysay dilkaasi.
Masuulkaan ayaan bixin faah-faahin intaasi ka badan, wuxuuna sheegay in maanta laguda galaayo falka baaritaanka ah ee dilkaasi loo geystay hooyada iyo Wiilka ay dhashay.
Gobolka Galgaduud iyo qayb kamid ah Gobolka Mudug, waxaa ka taagan xiisad udhaxeyso beelo halkaasi wada daga oo dhawaan ku dagaalamay deegaan ku dhaw Degmada Xarar dheere ee Gobolka Mudug, inkastoo Odayaasha deegaanka ay ku baxeen colaada oo waan-waan ay socoto.
Deeganada miyiga badanaa dilalka qorsheysan ee ka dhaca ayaa salka ku haayo aanooyin qabiil iyo kala dhicida xoolaha iyo dhul beereedka.
Previous articleUrurka al.shabaab oo gudaha u soo galay magaalada muqdisho…
Next articleMadaxweynaha galmmudug iyo golaha wasiirada oo kulan ay qaateen uga hadlay dib u howlgalista dekada hobyo..dhageyso…daawo sawirada…